नेतृत्वको मनोमानि को कारण माओवादी भोटेकोशीमा पल्टियो : शेर्पा - सारा खबर
काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी गाउँपालिका वडा नं. ३ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार निमा सोना शेर्पा २८६ मत ल्याएर विजयी हुनु भएको छ । उहाँको प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसको काजी शेर्पा को २८३ मत आएको थियो । ३ भोटको अन्तरले काजि शेर्पाले हार व्यहोर्नु परेको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती अध्यक्ष सरल सहयात्रीको एकलौटि निर्णयबाट स्थानीय तह मा उम्मेदवार छनौट भएकोे कारणले पार्टी बाट ७३ जनाले विद्रोह गरी स्थानीय तहको बैशाख ३० गते भएको चुनावमा भोटेकोसी गाउँपालिकामा दिपेन्द्र कुमार श्रेष्ठले अध्यक्षमा बागी उम्मेदवार दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको भोटेकोसी गाउँपालिका पुर्व इन्चार्ज आङछिरि शेर्पाले जानकारी दिनु भएको छ ।
उहाँ भन्नु हुन्छ “ नेतृत्वको मनोमानि को कारण माओवादी भोटेकोशी मा पल्टियो”। यसै गरी वडा नं. ३ मा निमा सोना शेर्पाले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएको आङछिरि शेर्पाले सारा खबरलाई बताउनु भयो ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट विजय निमा सोना शेर्पा
पालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट पासाङ नोर्बु शेर्पा अध्यक्षमा र दिक्षेन शेर्पा उपाध्यक्षमा विजय भएका छन् । पार्टी भित्रको कलहको कारणले भोटेकोसीमा माओवादीले हार ब्यहोर्नु परेको छ भने वडा नं.३ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार निमा सोना शेर्पा र सदस्यमा माया शेर्पा विजय भएको छ ।
अघिल्लो लेखमामहर्जनलाई प्रतिस्पर्धी न्याैपानेले दिए बधाई
अर्को लेखमाबलात्कार विरुद्ध प्रधानमन्त्री निवास अगाडि युवाहरुको प्रदर्शन : बलात्कारी लाई फाँसी को माग